Tan iyo bartamaha todobaadkii hore, magaalooyinka Mareykanka waxaa ruxay banaanbaxyo ka dhashay dilka nin madow ah.
WASHINGTON, US – Tan iyo bartamaha todobaadkii lasoo dhaafay, qaybo kamid ah Mareykanka waxaa gilgilay banaanbaxyo waaweyn oo rabashado watay kuwaas oo ka dhashay dilka nin madow ah oo aan hub waddan.
Askari ka tirsan bileyska ayaa ka dambeeyay kadib markii uu qoorta dhulka ugu qabtay isla markaana uu ku haayey illaa iyo uu ka dhinto.
George Floyd oo 46-jir ayaa ku qaylinayey "ma neefsan karo, hooyo". Muuqaal laga soo duubay dhacdada ayaa aad loogu wadaagay baraha bulshadda. Falkaas wuxuu cusbooneysiisay la dagaalanka takoorka Mareykanka.
Dhimashadiisa ayaa is-qabqabsi kala dhex-dhalisay Muslimiinta iyo Madowga, maadaama booliska uu u yeeray shaqaale ka tirsan tukaan uu u adeeg ka doontay George Floyd, sidda ay warineyso warbaahinta.
Howlwadeenka tukaanka Cup Foods ayaa doonayey in uu ku wargeliyo booliska in xaanshida lacagaha lagu bixiyo oo ay ku saxiixan tahay 20 Doolar uu leeyahay nin kasoo jeeda dal Carbeed isla markaana Muslim ah.
Illaa iyo haatan ma jiraan warar madax-banaan oo xaqiijinaya sheegashooyinkaan iyo waxay sababay in boolisku gacanta ku dhigo George Floyd.
Hay'adaha nabad-gelyadda iyo kuwa sirdoonka ee Mareykanka ayaa waydiistay dadweynaha in ay lasoo wadaagaan hadii ay hayaan macluumaadyo iyo muuqaalo dheeraad ah oo ay ka dubeen goobta falku ka dhacay.
Sidee Soomaalida uga dhex-muuqdeen dibad-baxa?
Maadaama goobta mashaqadu ka dhacday ahayd koonfurta Minneapolis oo ah magaalo ay Soomaalidu ku badan tahay, isu soo baxyadda waxaa kaalin weyn ku lahaa jaaliyadda oo dareenka la wadaagay qoyskia dhibanaha.
Cali, oo ah sawir-qaade una waramay wargeyska MEE, ayaa daboolka ka qaadey in ay ku faraxsan yihiin taageeradda ay u muujinayaan qoyska.
"Waa wax aad u qurux badan in Soomaalida ay soo baxeen. Waxaan aaminsanahay maadaama ay waxu ka dhaceen Minneapolis oo aan u badanahay waa in aan doorkeena muujinaa," ayuu raaciyey.
Khadiija Cali, oo ah sawir-qaade kale kana qeybgashay mudaaharaadka, ayaa sheegtay in xadgudubyadda bileysku yihiin kuwa isa soo taraya.
"Marka laga soo tago dhammaan xaaladaha naxariisdarrada bilayska ee aan ku lug lahaa ama aan ka warqabo, ama aan la noolahay marqaati ahaan, waxaan u maleynayaa in tani tahay midda aadka ugu dhow gurigeyga sababtoo ah waxay ku dhacday qof kamid ah bulshadeyda," ayay xustay.
Soomaalida ayaa Minneapolis ku leh xarumo ganacsi, balse nasiib wanaag isku duubni ay sameeyeen ayay kaga guuleysteen in ay kaga hortagaan kooxaha banaanbaxayaasha kamid ah ee boobka sameynayey.
Takoorka dadka madowga ah waa mid kamid ah caqabadaha ugu xasaasisan ee dowladnimada casriga ah ee Mareykanka wajaheyso isla markaana la rumeysan yahay in ay waqti badan qaadaneyso in gebi ahaanba lasoo afjaro.
Trump oo amray xayiraad ka dhan ah mas'uuliyiinta maxkamad caalami ah
Caalamka 12.06.2020. 19:00
Cunaqabateynta oo si guud aan loo fahfaahin ayaa ka kooban quseysa dhinacyadda dhaqaale iyo socdaalka.
Dadka uu Covid-19 bisha dambe ku dili karo Mareykanka oo la saadaaliyey
Caalamka 16.05.2020. 09:35
Xaqiiqo ay Soomaaliya kala mid tahay Syria iyo Iraq tan iyo bilowgii 2020
Soomaliya 11.03.2020. 06:30
Kenya oo war cusub kasoo saarey weerarkii Al-Shabaab ee Sareedo
Afrika 07.01.2020. 12:51
Mareykanka oo balanqaad horleh u sameeyay Dowladda Soomaaliya
Soomaliya 01.01.2020. 14:10